माके–एमालेको समाजवाद र बोकाको काँधमा राँगोको हलो : कञ्चन – eratokhabar
माके–एमालेको समाजवाद र बोकाको काँधमा राँगोको हलो : कञ्चन
ई-रातो खबर २०७५, २३ बैशाख आइतबार १३:३० May 6, 2018 724 Views
एमाले–माके एकता ‘ए ! कता ?’ जस्तै भएको छ । कतिपय सन्दर्भमा यो कुहिरोका कागजस्तै रुमलिएको छ पनि । एकता नै सबथोक हो भन्दै जडसूत्रीय शैलीमा माके–एमाले गठबन्धनबाट क्रान्तिकारी कार्यदिशाबिनाको व्यापारिक एकता जसरी हल्ला गरिएको छ, त्यसको राजनीतिक औचित्य देशमा मुट्ठीभर दलाल पुँजीवादी राजनीतिक लुटेराहरूको लुटखसोटबाहेक अर्को केही हुनेछैन । देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने, वास्तविक स्वाधीनताका लागि देशलाई एकताबद्ध गर्ने, देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी विश्व अर्थव्यवस्थामा आफ्नो स्थान बनाउने, जनतामा समृद्धि र राजनीतिक उन्मुक्ति पैदा गर्नेभन्दा यो एकता ती मुद्दाहरूको ठीक विपरीत देशमा दलाल पुँजीवादको बर्चस्व बढाउने, देशलाई अरू पराधीन बनाउने, जनतालाई अरू कंगाल बनाउने, एकाधिकार पुँजीवादीहरूको नंग्रा अझ गहिरो बनाउने, जनतामाथि अरू तानाशाही व्यवस्था थोपर्ने उद्देश्य यो एकतामा अन्तर्निहीत रहेको छ । एकताको दाउपेचमा कुर्ची र कमाइको हिस्सेदारी प्रमुख मुद्दा बनेको स्पष्ट हुन्छ । के यो एकता प्रक्रियामा एमालेले अहिलेसम्म अँगालेको संसद्वादी प्रतिक्रियावादी राजनीति परित्याग गरेको कुनै सार्वजनिक या आन्तरिक अभिमत कहीँ प्रकट गरेको छ ? के माके पार्टीले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका र संसद्वादमा आत्मसमर्पण गर्नुको कारण र त्यसबाट मुक्त हुने विषयमा कुनै सार्वजनिक या पार्टीभित्र अभिमत प्रकट गरेको छ ? समाज विकास र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्न अनिवार्य बत्रे यी सैद्धान्तिक विषयहरू माके–एमालेका नेताहरूका लागि ‘थोत्रा किताब’ र ‘हरियालीबिनाको कोरा सिद्धान्त’ हुने गरेका छन् । उनीहरूको सिद्धान्त र हरियाली जनताको रगत पसिनाको लुट, साम्राज्यवादीहरूको दलाली र जनतामाथिको दमनको प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ । उनीहरूको एकताको जोड–घटाउ केवल कुर्चीको वरिपरि घुमेको छ । माकेसँग एकता होस् र उसको घोडा चढेर सरकारको सवार चलिरहोस् भत्रे एमालेहरूमा बिथोलिँदो एकता प्रक्रियाले एक प्रकारको हतास मानसिकता बत्र खोजेको आभास हुन्छ । एमालेको भ¥याङ चढेर कुर्ची छाड्न नपरोस् भत्रे माकेभित्रका एमालेपरस्तहरूको हतासा एमालेको भन्दा बढी देखिन्छ । दुबै पार्टीका आकांक्षाहरू व्यग्रताका साथ आ–आफ्ना पार्टीका चेयरमेन या मेचाधीसहरूको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छन् ।
प्रचण्डको आनीबानी र सङ्गठनात्मक तुक बुझेका ओली एकता गर्नेभन्दा सरकारको आयु लम्ब्याउने चालमा लाग्नेछन् । सरकार संचालनमा आजित बनेका माकेका कतिपय नेताहरूले निकाससहितको एकता खोज्नुपर्ने छ । किनभने एमालेको भेलमा डुबियो भने इतिहासमा नभेटिने गरी माके पार्टी रसातलमा भासिनेछ, जसको उद्धारका लागि, निकास अहिलेका लागि ठूलो बुद्धिमानी हुनेछ । माकेका लागि यो काम नै सबैभन्दा बढी डाइनामिक हुनेछ र अत्यन्त जटिल अवस्थामा पार लाग्ने त्यान्द्रो पनि । माकेका लागि निकाससहितको एकता त्यसबेला सम्भव हुनेछ, जब उसले केही सैद्धान्तिक–राजनीतिक विषयमा बहस चलाउन खोजोस् । यो बहसबाट रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न माकेका लागि सहज हुनेछ । किनभने, एमालेभित्र सानो हिस्सा संसद्वादबाट समाजवादमा कसरी प्रवेश गर्ने भत्रे रोमान्समा तिरमिराएको छ, जसलाई प्रचण्डका वैचारिक तर्कहरू जायज हुनेछन् । यसले एकता भइहालेछ भने केपीको एकमना लादिने अवस्थामा एमालेभित्रैको केही हिस्सा प्रचण्डको पक्षमा आउने सम्भावना रहन्छ । यो स्थितिको सामना गर्न केपी ओलीले माकेभित्रका केही नेताहरूलाई साम–दाम–दण्ड–भेदका प्रयोगबाट आफ्नो पोल्टामा पट्याउन कोसिस गर्नेछन् । यसका लागि केपीले कोसैलाई मन्त्रीको कुर्चीबाट हटाउने र कोसैलाई पैसाले पुरिदिने काममा लाग्नुपर्नेछ र जसलाई जे गरेर हुन्छ, एमालेमा प्रवेश गराउन विश्वस्त हुने गरी पट्याउनुपर्नेछ । कुनै समयमा माओवादी भेट्न र प्रचण्डसँग कुरा गर्न मात्र फलामको च्युउरा चबाउनुसरह हुने केपीका लागि अहिले भने माकेलाई टुक्रा–टुक्रा पार्नु गहुँ–ओटको खाजा चबाउनु जतिको पनि हुनेछैन । त्यो अवस्था बुझेका प्रचण्डले मूलभूत रूपमा एमालेभित्रका भ्यागुताहरू झलनाथ, वामदेव र माधवहरूको चारो गर्न पाइन्छ कि भत्रे धन्दामा लाग्नेछन् । यो उनका लागि निकाससहितको एकताको अर्को बाटो हुनेछ । यो अवस्थामा प्रचण्डजस्ता सर्पको चारो हुनुभन्दा ओलीजस्तो बिच्छी नै बचोस् भत्रे सिद्धान्त भ्यागुताहरूको बाटो हुनेछ । यसरी हेर्दा माके–एमाले एकता अवसरवादी र धूर्तहरूको खेलको रोमाञ्चक प्रदर्शनजस्तो देखापर्छ ।
सरकारको विघटन र नयाँ सरकार बत्रे अवस्था पैदा हुँदा बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा स्थिरता र विकास हुन्छ भत्रे भ्रम संसदीय व्यवस्थाले जुन छर्ने गरेको छ, त्यो भ्रम पनि समाप्त हुनेछ । त्यसबाट देशमा संसदीय पार्टीमा बहुमतको सरकार भएन र विकास भएन भत्रे जुन तर्क गरिन्थ्यो, त्यसको औचित्य पनि समाप्त हुनेछ । त्यसको ठाउँमा एमालेका कतिपय नेताहरूले ‘न भूतो न भविष्यत्अनुकूलको मजबुत सरकार’ भनिरहेका छन्, त्यो पनि पूर्ण रूपले असफल भएको सावित हुनेछ । र, त्यसले यौटै तथ्य स्थापित गर्नेछ कि जबसम्म व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदैन, व्यक्तिहरूको आकांक्षा र संसद्वादी गणितले काम गर्नेछैन । यसप्रकारको व्यवस्थाका विरुद्ध जनताको प्रतिरोध व्यापक रूपमा विकास हुनेछ । एकातिर त्यसले संसद्वादीहरूलाई फेरि उही गणितको खेलमा पु¥याउनेछ, जसले सांसद्हरूलाई खरिद–बिक्रीमा फसाउनेछ । अर्कोतिर जनताको प्रतिरोध व्यापक रूपमा उठ्नेछ किनकि जनतामा यो तथ्य स्थापित हुनेछ कि पुरानो व्यवस्थामा व्यक्ति बदलिएर काम हुँदो रहेनछ, स्वयम् व्यक्तिलाई बदल्नका लागि व्यवस्था नै बदल्न आवश्यक हुँदो रहेछ । त्यसबाट जनताको जनसंघर्ष अझ व्यापक र विशाल हुनेछ, जसले पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई समूल नष्ट गर्नेछ र त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनेछ । त्यसले नै सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताबद्ध बनाउनेछ, राष्ट्रिय एकता पैदा गर्नेछ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेछ; शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटो तय गर्नेछ । मानव सभ्यताको सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवम् वैचारिक कदमको नयाँ सुरुआत गर्नेछ ।
२०७५ वैशाख २३ गते आइतबार दिउँसो १ : २५ मा प्रकाशित
नेकपाका २ जना कार्यकर्ता गिरफ्तार
संयुक्त विद्यर्थी संगठनले थप संघर्षको कार्यक्रम घोषणा